Vatamire Holm? | Holmbygden.se
Kufunga iwe kana mhuri yako kutamira ane rine runyararo kumaruwa? kugashira!
Tapota kutirovera runhare mibvunzo uye zvinovanetsa. Pamwe iwe uchida kutaura imwe mhuri nevana chii kuva nevana uye vanokura pano. Zvichida unoda mabhizimisi kwakavakirwa chero mhando? We kukubatsira!
Kufunga nezvako / uri yokuenda mabasa muna Sundsvall nemisha yakapoteredza? Pane nemabhazi pakufamba kuenda kwaaishanda muguta. Ungada kutyaira motokari, kungava kucherechedza kuti kufamba mutengo iri zvaizopedza ne isingadhuri dzimba yokufambisa uye zvinotora chete 35 Min kusvikira Stan.
Verenga zvimwe pamusoro pakufamba kuenda kwaaishanda uye bhazi mikana pano.
Tiudzei kana muchitsvaka chimwe chinhu chinokosha pokugara. Dzimwe nguva angatokwanisa zvakawanda nzvimbo pakarepo uye avo dzisina re pamusoro Website chipi chikonzero. Kana isu hamupinduri mubvunzo wako zvakananga, isu kukubatsira kuwana. Nyore nzira kunyora kana kudana isu, ona kwedu kuonana mashoko pano.
Unoda kubvunza mamwemazwi mubvunzo rakazaruka, unogona kunyora mu pazasi Comment munda.
Verenga pamusoro Stockholm The Vaviri yakawanikwa ayo chikamu-nguva vagari "Imba Ngirozi" iri Holm.
Unoda kugamuchira email uye / kana SMS kana AD idzva re kuti pokugara?
Zadzisa mashoko enyu pazasi, Sezvamunoda kuti dzitaure.
nhamba dzorunhare (kupinda imwe kana kupfuura):
Possible pachako mashoko, Please tsanangura zvido zvenyu:
Back to Accommodation Listings